Askar American Ah Oo Lagu Dilay Gobalka Nangahaar. – Bogga Calamada.com
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay qarax culus lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Nasaarada Mareykanka oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobalka Nangahaar ee dalkaasi.
Qaraxa ayaa loo adeegsaday miinada dhulka lagu aasa taasi oo la qaraxday gaari nooca gaashaaman ah oo ay la socdeen askar American ah.
Webka Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa qoray in qaraxaasi lagu burburiyay gaariga sidoo kale qaraxa lagu dilay afar askari oo American ah labo kalane lagu dhaawacay oo la socday gaariga ay miinada burburisay
Kolanyada Nasaarada Mareykanka ayaa muddo xirtay goobta qaraxa lagula beegsaday’iyadoona ugu dambeyntii baqtiyada iyo dhaawacyada askarta Americanka ay goobta ka qaaday diyaarad Elecobtar ah.
Dhanka kale 80 askari oo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Afghanistan ayaa iyagoo hubkooda wata waxey isku soo dhiibeen ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan gaar ahaan kuwa ka dagaalama gobalka Baada-giis ee dalkaasi.
Isku soo dhiibidda maleeshiyaatkan ayaa imaaneysa xilli ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan dagaal ay kula wareegeen saldhig weyn oo maleeshiyaatka maamulka Daba dhilifka Afghanistan ay ka sameysteen qeybo ka mid ah gobalka Baadagiis.
Halkan Ka Booqa Webka Imaarada Islaamiga Ah ee Afghanistan.